Manchester United Oo Ka Gudubtay Preston Rubuc Dhamaadka FA Cup kana Ku Beegan Arsenal
HomeWararka MaantaManchester United Oo Ka Gudubtay Preston Rubuc Dhamaadka FA Cup kana Ku Beegan Arsenal
Kadib markii qaybtii hore ee ciyaarta la isku mari waayay gool la’aan, kooxda Preston ayaa gool kaga naxsatay naadiga kaalinta labaad kaga jira horyaalka Premier League ee United kaas oo uu shabaqa ku ruxay ciyaaryahan Scott Laird qaybtii dambe ee ciyaarta.
United ayaa goolkaas kadib cadaadis badan saartay kooxda Seria C da ahayd kadibna kala daba timid oo kaga jawaabtay kubad khalkhal badan dabadeed dhalatay oo uu si khafiif ah u laagay Ander Herrera kaas oo ciyaarta barbaro ku soo celiyey.
Marouane Fellaini ayaa hadana kubad si xanaaq badani ka muuqdo oo uu shabaqa daloolinayo laag weyn ugu tuwaaliyey kadib kubadii uu madaxa ku dhuftay oo uu goolwaduhu si dirqi ah ku soo tufay, waxaana gool saddexaad oo rigoodhe ah raaciyey Wayne Rooney sideed daqiiqo ka hor dhamaadkii ciyaarta.
Waxay ahayd kulan kooxda awooda badan lihi ku sigatay in laga badiyo ama la barbareeyo ugu yaraan ka hor goolasha ay la timid, kooxda horyaalka heerka koobaad ah ka ciyaartaana , waxay muujisay dedaal aan caadi ahayn.
Guntii iyo gunaanadkii Man United ayaa sidaas ugu gudubtay Quarter Finalka FA Cup , waxaanay ku dhacaysaa Arsenal oo hore iyadu booska u diyaarsatay.
Eto’o Oo Si Rasmi Ah Ugu Biiray Sampdoria
27/01/2015 Abdiwahab Ahmed
Watch: Lens 3 – 2 Boulogne – Goals and Highlights